बिना पासवर्ड खोल्न मिल्छ अरुको फेसबुक ! – Sawal Nepal ||The Power of Information
बिना पासवर्ड खोल्न मिल्छ अरुको फेसबुक !
एजेन्सी २०७६ असार १४, शनिबार १५:०९ मा प्रकासित
तपाईंले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड आफूलाई मात्र थाहा छ, म मात्र खोल्न सक्छु भन्ने धारणा पाल्नुभएको छ भने तपाई गलत धारणामा हुनुहुन्छ । तपाईं बाहेक पनि अरु कोहीले तपाईंको फेसबुक खोल्न सक्छन् । के तपाईंले कहिल्यै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ की तपाईंलाई मात्र पासवर्ड थाहा भएको तपाईंको फेसबुक अकाउण्ट कसैले पासवर्ड बिनै मज्जाले खोलिदिन सक्छ भनेर ।
उनीहरुलाई तपाईको फेसबुक खोल्न पासवर्डको जरुरत नै पर्दैन । ती कुनै ह्याकर हैनन् ती फेसबुक कम्पनीकै कर्मचारी हुन् । फेसबुकले आफ्ना केही कर्मचारीलाई यो सुविधा दिएको छ । वास्तवमा जो कोहीको फेसबुक अकाउण्ट बिना कुनै पासवर्ड खोल्नसक्ने क्षमता अरुमा हुने त कुरै भएन ।
किनकी प्रयोगकर्तामाथि विश्वासघात गर्ने कर्मचारीलाई तत्कालै बर्खास्त गरिनेछ । यस्तो सुविधा सधैँभरी दिइने पनि होइन । निश्चित कर्मचारीलाई निश्चित काम पूरा गरुन्जेल सम्मका लागि मात्र दिइने हो ।
साइबर अपराधको नयाँ तरिका ‘इमेल फिसिङ’, के हो ‘इमेल फिसिङ’ ?
वल्र्ड लिंक कम्यूनिकेशनका शाखाहरु मध्ये दमक उत्कृष्ठ
मोबाइलमा भएको फोटो डिलिट भयो ? चिन्ता नगर्नुस्, यसरी फेला पार्न सकिन्छ
मोबाइल हरायो ? अब के गर्ने ?
मंगलमा भेटिएको सुख्खा ताल !